ဆွေးနွေးချက်:ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး လေယာဉ်ပြန်ပေးဆွဲမှု - ဝီကီပီးဒီးယား
ဆွေးနွေးချက်:ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး လေယာဉ်ပြန်ပေးဆွဲမှု
ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး လေယာဉ်ပြန်ပေးဆွဲမှု[ပြင်ဆင်ရန်]
The first recorded aircraft hijack took place on February 21, 1931, in Arequipa, Peru. The world's first fatal hijacking occurred on 28 October 1939.  --ဖြိုးWP (ဆွေးနွေးရန်) ၀၃:၅၀၊ ၂၇ မတ်​ ၂၀၁၄ (UTC)
လေယာဉ်ပျံပြန်ပေးဆွဲမှုများကို ခေတ်အဆက်ဆက် ကမ္ဘာ့နုိင်ငံအနှံ့အပြားတွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော်လည်း ၁၉၅၄-ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၅)ရက်နေ့က မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော လေယာဉ်အပုိင်စီးမှုကို ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး လေယာဉ်ပျံပြန်ပေးဆွဲမှုအဖြစ် သတ်မှတ်ရမည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ မကာအို(Macau)မှ ဟောင်ကောင်သို့ ပျံသန်းသော လေယာဉ်ကုိ ၁၉၄၈-ခုနှစ်တွင် ပြန်ပေးဆွဲခဲ့သည်ဟု အဆုိရှိပါသည်။ ထိုဖြစ်စဉ်တွင် လေယာဉ်တစ်စင်းလုံး ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာထဲကို ထိုးဆင်းပြီး ပျက်စီးသွားသဖြင့် လေယာဉ်ပေါ်တွင် ပါသူ ၂၅-ယောက်လုံး အသက်ဆုံးရှုံးသွားပါသည်။ လေယာဉ်စီး ခရီးသည်များထဲမှ ကိုရီးယားလူမျိုးသုံးဦးကို သံသယရှိခဲ့ပြီး သူတို့သုံးဦးက လေယာဉ်ကို လုပ်ကြံအပိုင်စီးခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်ဟု တွက်ဆကြသည်။
သို့သော်လည်း လေယာဉ်အပုိင်စီးကြောင်း ခိုင်လုံသော သက်သေအထောက်အထား မရရှိခဲ့ပေ။ ယခုကဲ့သုိ့ လေယာဉ်ပျံသန်းမှု မှတ်တမ်း(Black Box)ကလည်း မပေါ်သေးသဖြင့် အထောက်အထား မရနိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၁၉၅၄-ခုနှစ်က လေယာဉ်ပျံပြန်ပေးဆွဲမှုသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပထမဆုံးအဖြစ် သတ်မှတ်နုိင်သည်ဟု ဆုိရခြင်းဖြစ်သည်။ 
↑ စာရေးသူ ဦးလှသောင်းDip in B.Dh ၏ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး လေယာဉ် ပြန်ပေးဆွဲမှုကြီး၊ စာ(၉-၁၀)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဆွေးနွေးချက်:ကမ္ဘာ့_ပထမဆုံး_လေယာဉ်ပြန်ပေးဆွဲမှု&oldid=209781" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၇ မတ် ၂၀၁၄၊ ၀၆:၃၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။